Holmes Fiber ၏ထူးခြားသောအစည်းအဝေး | Holmbygden.se
Holmes Fiber ၏ထူးခြားသောအစည်းအဝေး
အပေါ် Posted 30 ဇန္နဝါရီလ, 2016 အားဖြင့် Holmbygden.se
ဘို Lindroos, Keith Sahlin, Roland Hultman, Lars-Erik Persson, Gimåforsအတွက်ထူးခြားသောဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် Ulf Wikholm နှင့် Stefan Edin.
အခြားနေ့ကတစ်ဦးထူးကဲအစည်းအဝေးတွင် Holmes Fibers ဘုတ်အဖွဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး. အဖွဲ့ဝင် '' ၌မွေ့လျော်စေရန်, ကအားလုံးကိုဗျူရိုကရေစီနှောင့်နှေးယခုနောက်ဆုံးတော့ Holmes Fibers လျှောက်လွှာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့ပြီးနောက်ကပြောသည်နိုင်ပါသည်. အသစ်ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအဘယ်ကြောင့်အစည်းအဝေးခဲ့သည့်သတင်းအချက်အလက်မှကောင်တီဘုတ်အဖွဲ့ဖြည့်စွက်ဆန္ဒရှိနှစ်များတွင်လာရှိပါတယ်ကတည်းက.
ဤအချိန်, GimåforsBygdegårdမှာစီမံကိန်းအိမ်၏ဂျုံအရှည်နှင့်အတူကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုကျော်ခရိုင်bredbandseldsjälarမှာစုဝေး. ဘုတ်အဖွဲ့Holmsjön၏အခြားအဆုံးမှာထားရှိနောက်တစ်ကြိမ်, အပေါ် “Hultman Rakan”. Holmes ဖို့ဖိုင်ဘာဘရော့ဘန်းနှင့်အတူအလုပ်နှစ်မျိုးလုံးပုံဆောငျသဘောအရနှင့်စာသားHolmsjönပတ်လည်ရွာတွေချိတ်ဆက်.
လျှောက်လွှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာကဏ္ဍများကိုဖတ်ရှုဖို့လုပ်ထားတဲ့ကျယ်ပြန့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအားထုတ်မှုရှိပါတယ်, စီမံကိန်းကိုရှာတွေ့, ဘတ်ဂျက်တွက်ချက်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်ကြေးစုဆောင်း M.M.. ယေဘုယျအားပြုလုပ်မယ့်ကျော်ဖွင့် 180 ဝင်းအဖွဲ့ဝင်များ, အမြဲတမ်းနဲ့အိမ်ပြန်နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ရှင်တွေ.
အခြေအနေကယနေ့ Bynet အဆိုပါဖိုက်ဘာပုံဆွဲ၏ဒီဇိုင်းကိုအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်, တင်ဒါရွေးချယ်ရေးအော်ပရေတာများနှင့်ကွန်ရက်၏အော်ပရေတာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်စဉ်. ဒါဟာအစဆောက်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်နေဆဲ. အရာအားလုံးရဲ့ချောင်းကိုပေမယ့်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့နောက်ဆုံးတော့လျှောက်လွှာနှင့်ခွင့်ပြုခဲ့ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုအတည်ပြုပြီးမှသာ. ဒါဟာ Holmes ဖိုင်ဘာတောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းမကြာမီပြီးနောက်အတည်ပြုမျှော်လင့်နေပါတယ်, လက်တွေ့အလုပ်နွေဦး / နွေရာသီစတင်နိုင်အောင်.
– သင်တို့အဘို့နှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင် 2016 (တချို့တောင်မှ 2015), လုပ်နေတာဒါကြောင့်ဖြတ်ကူး!
နှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင် 100:- BG မရောက်မှီတိုင်အောင်, 500-0229, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ရေးနှင့်အမည်များရေးရန်.
– အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကအီးမေးလ်ကိုပြောင်းလဲသကဲ့သို့သငျဖူး, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်လိပ်စာ? ဒီ refresh.
– သေးပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ Holmes Fiber ယခုလုပ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်အကြောင်းကြားကြပြီမဟုတ်သူကိုသငျသညျမြားအဘို့အ, အဆိုပါ စတင်. သေနတ်ဝင်ရှေ့တော်၌စျေးနှုန်းချိုသာ subscription ကိုအခကြေးငွေရဖို့. ပိုမိုလေ့လာသင်ယူဒီမှာမှတ်ပုံတင်ရန်.